February 2015 | OKKALA STORE
စူပါ ဘောလုံး မင်းသား များ
တက်တူးမ နေမင်း အိချောပို
များတို့ရဲ့ပင်လယ် မြင့်မြတ် သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဘေဘီ စပိုက်ဒါမန်းလေး တွေ အပေါ်ကိုတက်သွားတာအလန်း
ရွှေရည်ရည်ဖြိုးမောင် - ကိုယ်ရံတော်
မိုးမိုး - သက်သေ ( 2015 - New ALBUM )
For Love or Money(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
သားစိုး - အာလူး သာကူး နှာဘူး ဂန်ဒူး
Love Maker ( Thai Drama Love 18 + )
Mc Bay Gyi - မင်းမှမင်းပါပဲ - ( Speical Online Mix...
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ကန်တော်ကြီးပန်ြး...
2015 ဖဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ စိန်ဂေဟာ စင...
Virgin Ghost ( 2015 ) - Korea Love Movie ( ချစ်တတ်...
Big Hero6(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Walt Disney A...
ဖြူဖြူကျော်သိန်း - ယုံလိုက်စမ်း (Official Video fo...
Ni Ni Khin Zaw - MTV ဂယ်ဘဲ..ဂယ်ဘဲ( Single Song )
ဂရေဟမ်၊ ပန်းရောင်ခြယ် – Wake Up Daddy 1.ကာတွန်း...
ဟိဏ်းသစ် – ပျိုချစ်မောင် 1. လူရိုးလေး 2. ကြင်န...
ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ MCC မှာ (၆၈) နှစ်...
Bagan Keyboard Cracked v5.6 (By Orange Cracker)သုံ...
I Me My Mine – ဇေရဲ [ CD ] 01 အဲမှာ အင်း အ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Cargo လေယဉ်-Antonov 225ကမ္ဘာ့အကြီးဆံ...
BOBBY SOXER - #21 ( 2015 New CD ALBUM ) လိုချင...
အဖြူရောင်ရဲတိုက် နေတိုး ပြေတီဦး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ...
John Wick(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Fury (14) မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ။ ...
Taken3( 2014 မြန်မာစာတန်းထိုး )
မီးခိုးငွေ့ တွေနဲ့ ကစားကြ သူ များ
နှစ်ခါပြန်ကြည့်ယူရတဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ တိုက်ကွမ်ဒိုကစ...
Miley Cyrus & သူမ၏ချစ်သူတို့ ကမ်းခြေမှာ ၀တ်စလစ်ကဲေ...
Posted by okkala net at 10:08 PM No comments: Links to this post
င်္Full Movie ကို okkala အင်တာနက်ဆိုင်ရှိ အသစ်ကြိုက်သူများ folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:40 AM No comments: Links to this post
၁။ အချစ်ကြောင့် download
၂။ ချစ်ခွင့်ရှိဦးမလား download
၃။ ကိုယ်ရံတော် download
၄။ လွမ်းနေဆဲ download
၅။ အချစ်ဆူး download
၆။ မင်းနဲ့ တွေတဲ့နေ့download
၇။ ပင်လယ်ပျော် download
၈။ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ download
၉။ အန္တရာယ်ရှိသောအချစ် download
၁၀။ လာမရှုပ်တော့နဲ့download
၁၁။ မျှော်လင့်ချက် download
၁၂။ မျက်ရည်တွေနဲ့ ရေးမယ့်စာ Ft-Sithu Min download
၁၃။ ချစ်သူခေါ်သံ download
<<<< Album တစ်ခုလုံး ဒေါင်းရန် >>>>
Posted by okkala net at 6:11 PM No comments: Links to this post
၁။ ညီမျှခြင်းတရား download
၂။ Love = ? download
၃။ အချစ်ဟာမီးလား download
၄။ မုန်းရင် download
၅။ အငြိမ်းချမ်းဆုံးသောအချစ် download
၆။ ပါပါရာဇီ download
၇။ နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာ download
၈။ သီးခြားနယ်မြေ download
၉။ အချစ်ကိုကိုးကွယ်ကြသူများ download
၁၀။ V.I.P download
၁၁။ အချစ်နဲ့ ဝိဥာဉ် download
Posted by okkala net at 6:04 PM No comments: Links to this post
Full Moive ကို okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:34 AM No comments: Links to this post
၁။ အာလူး သာကူး နှာဘူး ဂန်ဒူး (ft- ဘာဘူ)
၂။ အရှေ့ကိုလျှောက်ပါလို့ (ft- ဆိုင်းဆရာ ညီရဲရင့် မကြူကြူနွယ်)
၃။ မီးဘေးရှောင် (ft- ရွာစားလေး ထက်အာကာနှင့်အဖွဲ့)
၄။ 04 အလွမ်း (ft- ချမ်းချမ်း)
၅။ ပိုပြီးချစ်ပါ့မယ် (ft- ဘာဘူ)
၆။ ကျော် ကျော် ကျော် ကိုကြီးကျော် (ft- ရွာစားလေး ထက်အာကာနှင့်အဖွဲ့)
၇။ မင်္ဂလာပါ (ft- ဆိုင်းဆရာ ညီရဲရင့် စကားပြော)
၈။ အမုန်းတွေရှိသွားလား (ft- Lဆိုင်းဇီ)
၉။ ရုံးတော် လွှတ်တော် (ft- မေရှင် Dj Mix)
၁၀။ လုပ် (ft- ဖြိုးကြီး ဗစ်တား)
၁၁။ ဂျိပေဂျိ့ (ft- ဆိုင်းဆရာ ညီရဲရင့်)
၁၂။ အကြီးကြီးပဲ (ft- အိမ့်ချစ်)
၁၃။ အလွမ်းမြေ (ft- နဒီဝင့်နိုင်)
၁၅။ ငွေမြင်လျှင်လင်လုပ်မည် (ft- နဒီဝင့်နိုင်)
၁၆။ အာရုံပဲ (ft- ဇင်မိုးသူ)
Album တခုလုံး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်
Posted by okkala net at 11:37 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 1:21 AM No comments: Links to this post
Mc Bay Gyi - မင်းမှမင်းပါပဲ - ( Speical Online Mixtape) 2015
05. "အဖို" နဲ့ "အမ" သံယောဇဉ်
09. Fanshion မစားတဲ့ Rapping သမားရဲ့အချစ်
12. ငါတစ်ကယ်ကို ရူးနေရပြီ (Baby)
14. ညီမလေး ( Remix )
15. မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်
17. မိန်းကလေးချင်းတောင် ငေးရတဲ့ ကျနော့်ချစ်သူ
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ကန်တော်ကြီးပန်းခြံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ၀ိုင်းဆုခိုင်သိန်း ရဲ့ ပထမဆုံး စုံတွဲ တေးစီးရီး "ခါချနေရတယ်" Audio CDs မိတ်ဆက်ပွဲ
2015 ဖဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ စိန်ဂေဟာ စင်တာ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Valentine's Day အထိမ်းအမှတ် စုံတွဲဖက်ရှင် ပြိုင်ပွဲ
Posted by okkala net at 11:08 PM No comments: Links to this post
Virgin Ghost ( 2015 ) - Korea Love Movie ( ချစ်တတ်သူများသာကြည့်ရန် 18+)
Posted by okkala net at 8:25 PM No comments: Links to this post
အပျင်းပြေကြည့်မယ့်သူတွေ၊ အက်ရှင်ကားတွေပဲ ကြိုက်တဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ ဒီကားက ပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်စရာဖြစ်နေမှာပါ။
Sex Scene အချို့ နဲ့ Naked Scene အချို့ပါပြီး၊ လူငယ်တွေ မကြည့်သင့်ပါဘူး။ မိသားစုတူတူ မကြည့်သင့် ပါဘူး။ ဆဲဆိုတာနဲ့ Adult Language တွေတာ မိဘတွေအနေနဲ့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
Posted by okkala net at 7:31 PM No comments: Links to this post
Big Hero6(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Posted by okkala net at 12:31 AM No comments: Links to this post
ဖြူဖြူကျော်သိန်း - ယုံလိုက်စမ်း (Official Video for Valentine s Day)
Angelina Jolie ဒါရိုက်တာနဲ့ ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ရိုက်ကားထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption စာအုပ်ကို ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတာလေးပါ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ခံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး Louis Zamperini ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။ Louis Zamperini ဟာ အီတလီဇာတိဖြစ်ပေမယ့် မိဘတွေဟာ အမေရိကကို အခြေခြပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တာကြောင့် အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်လာပြီး ငယ်စဉ်အခါမှာတော့ သူ့ဟာ ပြဿ နာရှာတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူက သူ့ကို အပြေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကူညီသင်ကြားပေးပြီးတဲ့နောက်သူဟာ အပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာသူဟာ အောင်မြင်မှုတွေ ရလာခဲ့ပြီး အိုလံပစ်လိုပြိုင်ပွဲတွေထိအောင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုနောက်မှာတော့ သူဟာ စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်နဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာတော့ သူဟာ လေယာဉ်ဗုံးကြဲသူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ လေယာဉ်ဟာ သမုဒ္ဒရာထဲပျက်ကြသွားခဲ့ပြီး Louis နဲ့ တခြား ၂ ယောက်ဟာ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရက်ပေါင်း ၄၇ ရက် မျောနေခဲ့ပြီး တစ်ယောက်ကတော့ အသက်ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ Louis နဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက်ဟာ ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ ဆယ်ယူခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဂျပန်စစ်သုံပန်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ထိုအတောအတွင်း Louis ဟာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုး၊ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းမှုတွေ တွေ့ကြုံခဲ့ရပေမယ့် အလျော့မပေးပဲ ကျော်ဖြတ်သွားတဲ့အကြောင်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဇတ်ကားလေးပါပဲ။
Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Takamasa Ishihara တို့အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Takamasa Ishihara (Miyavi) ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Biography ဇာတ်ကားဖြစ်တာကြောင့် ဇာတ်ကားထဲမှ ဇာတ်ဆောင်ရဲ့ လေးစားအားကြစရာတွေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားအဆုံးမှာတော့ နောက်ပိုင်းဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့လည်းဆိုတာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ IMDB Ratings: 7.2/10 ရရှိထားပေမယ့် Rotten Tomatoes မှာတော့ 51% ပဲ ရရှိထားပါတယ်။ Angelina Jolie ရဲ့ ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ ဒုတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း By the Sea, Africa အစရှိသဖြင့် ရိုက်ထားထားပါသေးတယ်။
Full Movie ကို okkala အင်တာနက်ဆိုင်တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
ပထမတော့ ကြည့်နေကျ အတ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလို့ ထင်လိုက်ပေမယ့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ သမိုင်းဝင် လူသားတယောက်အကြောင်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတကားဖြစ်ပါတယ်..
သူ့နာမည်ကတော့ Christopher Scott "Chris" Kyle
သူဟာ United States Navy SEAL က Sniper တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ တရားဝင်စာရင်းအရ သူတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလ အတွင်းမှာ ၁၁၆ ယောက် ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းက လူပေါင်း ၂၀၀ ကျော် သုတ်သင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပြန်တယ်..
သူ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေလဲ မနည်းသလို တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်မှာလဲ တပ်တခုလုံး လေးစားအားကိုးရတဲ့ စနိုက်ဘာတယောက်လဲ ဖြစ်ပြန်တယ်…
သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းက သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ၊ စိတ်ခံစားချက် ၊ အတွေးအမြင်တွေကို ပြန်လည် တင်ဆက်ထားတာပါ.. တချိန်လုံး ပစ်နေ ခတ်နေတဲ့ ဇာတ်ကြမ်းမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး…
IMDb မှာ လူပေါင်း တစ်သိန်းကျော်က 7.5 ပေးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို အခြေခံထားပြီး အရောင်းရဆုံးစာရင်းမှာ ၃၇ ပတ်ကြာ စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒရမ်မာ ကြိုက်တဲ့သူတွေကို မလွတ်တမ်းကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ…
FULL MOIVE ကိုတော့ okkala အင်တာနက်ဆိုင်တွင် free ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
1.ကာတွန်း (သို့) ကမ်းမဲ့အလွမ်း – ဂရေဟမ်
2.အသဲကွဲသူ – ပန်းရောင်ခြယ်
3.မရွာနဲ့အုံးမိုး – ဂရေဟမ်
4.ဒိုင်ယာရီလေးသက်သေ – ပန်းရောင်ခြယ်
5.Wake Up Daddy – ဂရေဟမ် ပန်းရောင်ခြယ်
6.ဒီညတော့တို့ငိုမယ် – ဂရေဟမ်
7.The Only One – ပန်းရောင်ခြယ်
8.ယုံထားပေးပါ – ဂရေဟမ်
9.နင်နဲ့ငါ – ဂရေဟမ်
10.တကယ်ပဲချစ်ရဲ့လား – ပန်းရောင်ခြယ်
11.မင်းနဲ့ဝေးပြီးနောက် – ဂရေဟမ်
12.People Are – ပန်းရောင်ခြယ်
13.ဘောင်ကျော်သူ (ကြိုးပြတ်သူ) – ဂရေဟမ်
14.ငါ့ကမ္ဘာ – ဂရေဟမ်
ဟိဏ်းသစ် – ပျိုချစ်မောင်
12.Definition of love(Ft-စိုးကြီး)
15. Heart Breaker…..နောက်တစ်ယောက်ဆီသွားလိုက်တော့
Posted by okkala net at 11:20 PM No comments: Links to this post
ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ MCC မှာ (၆၈) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုလျက် ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ကာယကြံ့ခိုင်မှု ပြိုင်ပွဲ ဆုရသူများ Highlights
သုံးရအဆင်ပြေပြီး တော်တော် အသုံးများတဲ့ keyboard တစ်ခုပါ.. အဆင်ပြေရင်တော့ဝယ်သုံးပါ..
Posted by okkala net at 9:32 PM No comments: Links to this post
18 + ပြည့်ပြီးမှ ကြည့်ပါရန်
Posted by okkala net at 2:27 AM No comments: Links to this post
I Me My Mine – ဇေရဲ [ CD ]
01 အဲမှာ အင်း အဲမှာ[Feat-ကြက်ဖ ]
02 ပိကျိ ပိကျိ
04 အဆိပ်တိုက်ပွဲ [Feat-ပိုပို ]
08 မထုံတတ်တေး [Feat- မိစန္စီ ]
12 အထား [Feat- Jimmy Jacobs ]
13 အဆုံးမဲ့ [Feat -Joe GYi ,ရှိုင်းလေး ,MHL , စစ်ရန် ]
All SOngs Download Link [ pCloud ]
Posted by okkala net at 2:24 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 7:59 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 7:47 PM No comments: Links to this post